Kazi wazi kanjani ukuthi bangaki imishado kungaba? Kuseduze!
Njalo girl ufuna ukushada, ukuba umkhaya omuhle, indoda enothando futhi smart, abalalelayo. Lemicabango, Ngingathi kukhona e yilezozintombi kaningi, ngisho nangesikhathi beseyizingane. Futhi ingabe uyazi kanjani ukuthi yini okufanele uyilindele ngaphambi intombazane wayezoba ashada kanjani? Niqonde lokhu ukubhula ngokufunda intende intando.
Ngazi kanjani ukuthi bangaki imishado kungaba? Kuseduze! Nansi impendulo tingafundziswa ukuze ladies. Nokho, lokhu kuyinto elula kangaka cha. Kumele ukwazi izinto eziyisisekelo ukubhula ngokufunda intende niqonde ngokucacile. Khona-ke ungase ubuze, siyini lesi imfundiso lokho? Ngakho, ukubhula ngokufunda intende - isayensi imigca entendeni umuntu. Ngu ukuqonda okuhle kubo ungathola ikusasa labo kuze kube nangemininingwane emincane kakhulu. Nokho, ngokuzimela konke lokhu kunzima kakhulu ukuliqonda, ngakho uma ungakwazi, kungcono ukuba zifune usizo onguchwepheshe. Noma kunjalo, konke okufanayo akulesi sihloko ngikuxoxele kanjani ukuthola ukuthi imishado eminingi kungaba (ngesandla) bebodwa.
Kule migqa somshado
Yini umugqa idatha? Ngakho, lesi simo sengqondo wabeka phansi kwamandla ombuso, okubizwa ngokuthi ubuhlobo karmic. Kuye zingaki imigqa kukhona, abalingani abaningi unjalo umuntu, zonke zazo banikwa phetho, futhi zonke lezi ubudlelwano uzodinga zifezeke. Nokho, akubona konke ngakho elula, lokhu okumelwe balwele ukuzifinyelela. Akumelwe nje ukuhlala futhi ukulinda ngenxa yothando lwakhe, futhi nenze. Phela, akukhona okungavamile ukuba likhithike, lapho owesifazane engalweni imigqa embalwa kuyabonakala bomshado futhi zona kukithi kwaze kwaba yilapho esegugile, uhlala intokazi enesizungu. Lokho kungenxa yokuthi "indoda zabo" lona wesifazane ngesikhathi esithile aphuthelwe nokushaywa noma baxoshwe.
Kumele ukuthi entendeni umuntu has a lot of imigqa ehlukene. Kungaba ibhekwe kokubili ngokuzimela nokufunda encwadini igama elifanayo "ukubhula ngokufunda intende". Yesithombe ekhasini isandla zingafakwa nendawo, zibheka, baphuke ukuba, ukuze ujike. Konke lokhu kuyinto evamile. Futhi phakathi naso sonke lesi ukuthola bands ukuthi banesibopho umshado? Okokuqala ukubheka inhliziyo umugqa kangcono, okuyinto ilungiselelo ukuba cishe zonke umthandi zonke izinto imilingo ezaziwayo. Ungomunye the evelele kunazo zonke, phezulu entendeni, ukuqala at nesigamu kuya ngamasentimitha amabili ngezansi umunwe kancane futhi esandleni, ikakhulukazi nendawo, ngezinye izikhathi - ekupheleni le Ukugoqa kwelinye direction noma kwenye. It uyazi zonke amantombazane abanentshisekelo ukubhula ngesandla. Line umshado kancane ngaphezu emgqeni inhliziyo futhi ngezansi umunwe kancane. Kungaba eyodwa noma kuyoba ezimbalwa, zingabantu ecacile noma imakwe ngokuphelelwa umoya. Nokho, lo mugqa uhlale bushelelezi (ngezinye izikhathi - ne amagatsha) hhayi isikhathi eside kakhulu, cishe isentimitha nengxenye.
Ngakho, ingabe uyazi ukuthi zingaki imishado kungaba (ngesandla)? Ukuze wenze lokhu, mane nje ukubala inani labo imigqa, okuyinto zichazwe ngenhla. Kubhekwe inketho enhle uma umugqa owodwa kuphela, wamemezela ngaphandle izimfoloko amagatsha. Yena ne lutho okwakuthandelene futhi musa "wathela". Lokhu kusho ukuthi umuntu uyoba ezinye ubuhlobo sangempela ekuphileni. Kungani-ke bathi "bangempela"? Into wukuthi lomugqa libonisa kuphela lokho busekelwe othandweni futhi umuzwa okumsulwa futhi abaqotho kakhulu. Ngokuvamile abantu abanjalo Monogamous nesimiso impilo yakhe kusukela ebusheni bakhe kuqhubeke, ekufuneni ongashadile. Abathandwayo kungaba yokuthi kwenzeka: omunye abashadayo entendeni umugqa owodwa, kanti eyesibili - amabili. Lokhu kusho ukuthi ngesikhathi esithile esisodwa lapho imigqa emibili bayoba nethuba ukwakha ubuhlobo ezahlukene, futhi esekelwe okumsulwa kanye yizicukuthwane imizwa - uthando. Nokho, lokhu akusho ukuthi ngeke. Umuntu unelungelo lokukhetha, kanye angase azame ukusindisa umshado wakhe wokuqala, zihlatshwe injabulo yakhe entsha.
Siyaqonda indlela ukufunda, indlela imishado eminingi kungaba (ngesandla). Kusho ukuthini uma umuntu has a imigqa olufanele ezimbalwa isandla? Ngo ezinjalo umuntu uyoba abangaphezu koyedwa ukuphila. Kungaba imishado njengoba egcwele, futhi nje ubuhlobo besikhathi eside ngaphandle isitifiketi somshado. Kumele wathi abanye imigqa Ungaveza obuqinile ngokomzwelo oyedwa noma omunye umuntu, kulesi simo uma umuntu ekuphileni umshado. Nokho, kolayini abaningana ngokwemvelo yabo ingase ibe khona ehlukile.
Sula, ezijulile, libizwa. Likhuluma ngalezo abalingani ukuthi kuyoba ezinkulu ekuphileni komuntu othile.
Multiple omnene. Lisitshela ngabantu abenza ngokuvamile nje awukwazi ukunquma ku abalithandayo noma ungazi ukuthi yini abayifunayo. It kuwuphawu ukuntengantenga ngokomzwelo, ngesilinganiso abantu abanalo ngenxa ubudlelwano ukuphila eziningi engenangqondo. Futhi ngenkathi lezi imigqa ngeke kucace, lo muntu umane akuyona nobuhlobo obungathi sina.
Olayini ababili ukuthi sekuseduze ukuba nomunye, bathi umuntu ungumthandi.
Eside noma esifushane?
Yini enye ukusho mayelana ukubhula ngokufunda intende umshado imigqa? Izimpawu - nakhu okunye kubalulekile ukuba banake. Ngakho, emgqeni isikhathi eside kakhulu, futhi angena Zone Venus noma Apollo Hill. Kulokhu-ke kubalulekile ukuba ukhulume ngezindlela uyiphupho, esekelwe romance. Uma umuntu ku eGqumeni Jupiter kuyinto cross, kungase kukhombise enamandla ngendaba nengxenye yayo yesibili. Uma umugqa umshado iza entabeni Apollo kanye Sun umugqa, umuntu onjalo kumele washada nomuntu abadumile.
Incazelo Imfihlo: igama Radmir fighters esizalwa naso ukuthula
Qamba Adel. Inani kanye Ukudalelwa
Izindlela lokubhula ngokudlala amakhadi. ukuqagela ubudala
Inani Igama Kaleria. Umsuka, igama sici
Ungavuli "umthwalo", noma kanjani ukuqeda imicabango esilawulayo
Gyro exerciser isandla: kanjani ukuyisebenzisa?
Smartphone Asus ZenFone 4 A400CG: ukubuyekezwa abanikazi
Indawo yokudlela "Old Town" Krasnodar: ikheli, izithombe kanye nokubuyekeza
Ubufakazi Christian ngokuphulukisa nendlela simnxuse
Ukuvuvukala unyawo lwesobunxele